Affiliate Program ကိုမိတ်ဖက်များအတွက်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
လူတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Affiliate Program တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်အားဖိတ်ကြားခြင်းသို့မဟုတ်အထူးအကောင့်မလိုအပ်ပါ။ ငွေရှာရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလင့်များနှင့်စကားဝှက်ကုဒ်များကိုသက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာများပေါ်တွင်တင်ပါ။
app ကိုမှတဆင့်ရရှိသောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ link ကိုအလိုအလျောက်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဤအလင့်များဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်သင့်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများတွင်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တင်ကုဒ်တွေကို embed ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖိုရမ်များ၊ အသိုင်းအ ၀ ိုင်းစာမျက်နှာများ၊ လူမှုကွန်ယက်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားအသွားအလာများဖြစ်ပေါ်စေသောအခြားအရင်းအမြစ်များမှတွဲဖက်ချိတ်ဆက်ထားသောလင့်ခ်များကိုမြှင့်တင်ပါ။ ကြည့်ရှုသူအသစ်များအတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြော်ငြာများကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးနှုန်းများကိုသုံးပါ။
ကျနော်တို့ပရိသတ်တွေဝေမျှလိုလျှင်သင်သည်သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တင်တွေကို embed နှင့်ရည်ညွှန်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လုပ်တိုင်းဝယ်ယူထံမှငွေရှာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံများတွင်ကိုယ့်ဆီကနေအသွားအလာ generate နိုင်မလဲ?
သင့်အားလွှမ်းခြုံမှုတိုးမြှင့်စေရန်နှင့်ဆွဲဆောင်အားပိုမိုရရှိရန်အတွက်ဤအပလီကေးရှင်းကိုဘာသာစကား (၁၇) ခုဖြင့်နေရာချထားပါသည်။
သင်ရရှိသောငွေအားလုံးသည်မိတ်ဖက်အကောင့်ထဲသို့အကြွေစေ့အဖြစ်ပြောင်းသွားသည်။ သင်သည်ဤဒင်္ဂါးများအားငွေတစ်ထောင်နှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာဖြင့်လဲလှယ်ပြီးငွေထုတ်ယူနိုင်သည်။
လောလောဆယျပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ် Yandex.Money Bitcoin မှဆုတ်ခွာတောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံနေကြတယ်။
အနည်းဆုံးထုတ်ယူနိုင်သည့်ပမာဏမှာ ၁၀ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် 1-2 ရက်ကြာပါသည်။ သငျသညျ5ရက်အတွင်းသင့်ရဲ့ရံပုံငွေမခံမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်:
သင်ဘယ်လိုတစ်ဦး Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးသလဲ?
wirexapp.com, coinsbank.com, bitpay.com: တစ် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးငွေထုတ်စက်ကနေပိုက်ဆံထုတ်ယူဖို့, အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်များတ sign up ကို
သငျသညျတွဲဖက်အသုံးပြုသူများနှင့်တွဲဖက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဝင်ငွေရဲ့ 10% ကဝယ်ယူအားလုံးဒင်္ဂါးပြားပေါ်မှာ 30% comission ရပါလိမ့်မယ်။
သတ်မှတ်ချက်များကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒပံ့ပိုးမှုAffiliate Program ကိုဝက်ဘ်ကင်မရာထုတ်လွှင့်သူဖြစ်လာသည်Affiliate agreementCreator Agreement
webcam က်ဘ်ဆိုက်များ porn ထက်ပိုကောင်းများမှာအဘယ်ကြောင့်Erotic ပုံပြင်များအရွယ်ရောက်သော webcam chat Zozo Chat သို့မဟုတ် Flirtymania.plusအရွယ်ရောက်ပြီးသူ webcam ကို LuckyCrush သို့မဟုတ် Flirtymania.plus စကားပြောပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူ webcam ကို LiveJasmin သို့မဟုတ် Flirtymania.plus chatအရွယ်ရောက်ပြီးသူ webcam ကို chat ImLive သို့မဟုတ် Flirtymania.plusအရွယ်ရောက်ပြီးသူ webcam တွင် Camster သို့မဟုတ် Flirtymania.plus chat